कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो - चौतारी पोष्ट अनलाइन
यति बेला नेपाली कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न १४ औं महाधिवेशनको महासंग्राम चलिरहेको छ । २०७२ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय नेतृत्वको पदावधि सकिएको डेढ वर्ष पुुग्यो । कांग्रेस विधानतः नेतृत्वलाई विधिवत् चार वर्ष, विषम परिस्थितिमा थप एक वर्ष, त्यसपछि अन्तिममा ६ महिना कार्य अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान देखिन्छ । त्यो पनि कांग्रेसले भरपूर प्रयोग गरिसकेको छ ।
यो एजेन्डा क्लोज भइसक्यो । अबको एजेन्डा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक समृद्धि हुन्। ‘संसारमा एजेन्डाविहीन कुनै क्रान्ति सफल भएका छैनन् । जसले समग्र समाज रुपान्तरणका एजेन्डा बोक्छ, त्यो नै सफल हुन्छ र सृजनशील समाजमा स्थापित गर्छ । हाम्रो समाज राजनीतिक रुपान्तरणको दिशामा हैन, समाज रुपान्तरणको दिशा उन्मुख छ ।
त्यस्तै हामी बीपीवाद मान्छौं । बीपीका आफ्ना उत्कृष्ट भनाइलाई हामीले आत्मसात् गर्न सकेका छौं त ? उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कुनै वर्ग वा सम्प्रदायसित हाम्रो शत्रुता कदापि छैन । नेपालमा बस्ने वा उनीहरुसित कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुने सबै व्यक्ति हाम्रा दाजुभाइ हुन् । सम्पूर्ण देशको उन्नति नै हाम्रो अभिष्ट लक्ष्य हो । यसकारण कुनै वर्ग विशेषले हामीबाट व्यक्तिगत अनिष्टको आशंका गर्नु उचित छैन । हाम्रो निमित्त सबैको सहायता ग्राह्य छ र हामी जाति, वर्ग वा कुलको पर्वाह नगरी योग्यताको विचार गर्दै सबका सहायक बन्ने छौँ। सम्पूर्ण राष्ट्रको उन्नति र अभ्युदयमा नै हामी प्रयत्नशील रहेका छौं ।’
कतिपय नेता राज्यका तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा छन् । तिनीहरुले जनहित र लोकतन्त्रको पक्षमा कति काम गरेका छन् ? यिनको पनि पार्टीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकनका आधारमा नेता चुन्ने/नचुन्ने ती क्रियाशील सदस्यको हातमा छ । यसलाई कांग्रेस नेतृत्व पहिचान गर्न सक्ने अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । समग्रमा विपक्षलाई गाली गरेर हैन, स्नेहले युद्ध जित्न सक्नुपर्छ । त्यो अभ्यासमा कांग्रेस नेताले जानुपर्छ अनि कांग्रेस बलियो हुन्छ । कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन्छ ।newsonepal/from,२४ भाद्र २०७८
Prevएमसीसी संशोधन हुन्न : सुमार, सरकारको विचार आएपछि बोल्छु : ओली
Nextव्यवसायीक कागती खेती गर्ने तरिका